#Keyga anaa iska leh kaagana kula lihi ma socon kartaa waqtigan? | Get Latest News From Horn of Africa |
Home Opinion #Keyga anaa iska leh kaagana kula lihi ma socon kartaa waqtigan?
#Keyga anaa iska leh kaagana kula lihi ma socon kartaa waqtigan?
Madaxweynuhu in reer Muqdisho oo loo diidan yahay in ay Dowlad Goboleed noqdaan oo guddoomiye la magacaabay matalo meesha Gobollo yar yar ay rag madaxeyne yaal sheegto matalaan raali miyuu ka yahay?
Waa caqabadda koowaad ee madaxweynaha ku hor gudban una baahan in uu caddaaladdi uu ballan qaaday meeshaas ka bilaabo siiyana xaqa reer Muqdisho u leeyihiin in ay qaranka matalaad ku yeeshaan, taas oo maqaamka madaxweynaha kor u qaadi doonta.
Waxa madaxweynuhu ballan qaaday in uu kuwa musuqa sameeyo beero ku fali doono, su’aasha aan qabo shacbi badan oo soomaaliyeedna aan filayo in ay ila qabban ayaa ah 11kii bilood ee ay dowladdu jirtay musuq ma dhicin miyaa cid loo soo xiray oo shacbiga lala wadaagay ma jirtaa?.
Cidda diidan in Muqdishu maamul Gobleed yeelato ogolna in canshuurtana reer Muqdisho laga qaado waxa ay ka mid tahay musuqa la rabo in madaxweynuhu meesha ka saaro. Muqdisho ha bixiso wixii lagu heshiiyo oo dhaqaala aha hana hesho xaqqeeda, waa middas mida xaqqa ah.
Muqdisho oo marwalba canshuurta lagu kordhiyo waxa ay keeni kartaa in ganacsatadu meela kale u wareegto taas oo macnaheedu yahay arin siyaasadeysan ama la rabo in xamar horumarka lagala dagaalamo.